Imfazwe yeenkwenkwezi kubantu abadala, i-10 yamahlaya aseRashiya
Imfazwe yeenkwenkwezi kubantu abadala
I-Anime yeenkwenkwezi ezinkulu zeenkwenkwezi kubantu abadala. Iimeko ezithakazelisayo zenzeka kwiwadi apho amaqhawe afihliweyo kwiminqweno yesondo. Abaqulunqi baseSan Francisco basebenze kule projekthi bebeka ingcamango yokudala kunye nefayile yokudala, ngokwenza imizekeliso yesondo ngesiseko apho i-anime yenziwe. Idatha ibonise ukuba i-44% yabalandeli be-site abasebenzisi abavuthiweyo, bakhetha ukujonga kwi-intanethi ngexesha elingenanto yosuku, ukuphucula ingqondo.
eyona > 18 + > Imfazwe yeenkwenkwezi kubantu abadala
Imfazwe yeenkwenkwezi zokujonga abantu abadala kwi-intanethi kwifowuni yakho yeselula